Wararka - Kobaca sicirka kobalku wuxuu ka batay wixii laga filaayay ama wuxuu ku laaban doonaa heer caqli gal ah
Qeybtii labaad ee sanadka 2020, wadarta guud ee soo dejinta alaabada ceeriin ee cobalt-ka waxay aheyd 16800 tan, iyadoo sanad-ka-sanadka uu hoos u dhacay 19%. Kuwaas waxaa ka mid ah, wadarta guud ee soo dejinta macdanta 'Cobalt ore' waxay ahayd 0100 tan oo bir tan ah, oo sannad-sannadeedku hoos u dhacay 92%; wadarta soo dejinta alaabada dhexdhexaadka ah ee loo yaqaan 'cobalt hydrometallurgy' waxay ahayd 15800 tan oo tan oo bir ah, iyadoo hoos u dhac sanad walba ku yimid 15%; wadarta guud ee soo dejinta cobalt-ka ceyriin wuxuu ahaa 0800 tan oo bir tan ah, iyadoo koror sanad-sannadeedka ah 57%.
Qiimaha cobalt-ka ee suuqa gudaha ayaa aad kor ugu kacay. Tan iyo bartamihii bishii Luulyo, qiimaha korontada, kobalt sulfate iyo koloriin koloriinku waxay kordheen ku dhowaad 10% - 11%, taas oo ka sarreysa tii xilligii hore ee bishii Juun ee Juun. Korodhka qiimaha kobaltka elektroolka ah, cobalt sulfate iyo koloriin koloriin laga bilaabo bisha may ilaa bisha Juun waa qiyaastii 3-4%.
Isbeddelka qiimaha ee alaabta SB-da ee Cobalt laga bilaabo Maajo 8 illaa Julaay 31, 2020
Bartamaha Juun wixii ka dambeeya, qiimaha gaarka ah ee kobaltka koronto-kuleylka ku shaqeeya 'sulfate cobalt sulfate' ayaa si tartiib tartiib ah ugu janjeera 1, inta badan waxaa ugu wacan baahida loo qabo qalabka batteriga
Isbarbardhigga alaabada SMM ee cobalt laga bilaabo Maajo 8 illaa Julaay 31, 2020
Laga soo bilaabo Maajo ilaa Juun ee sanadkan, qodobka kaliya ee taageeraya kor u kaca qiimaha wuxuu ahaa xiritaanka Koonfur Afrika bishii Abriil, iyo yaraanta alaabada ceyriinka ee kobaltka gudaha laga soo bilaabo May ilaa June. Si kastaba ha noqotee, suuqyada gudaha ee dhalaalaya aasaaska alaabooyinka wali wey badan yihiin, sulfate cobalt wuxuu bilaabay inuu soo muuqdo bishii de stock, aasaaska aasaasiga ah. Baahida hoos u socota si weyn uma aysan hagaajin, waxaa lagu soo rogay dalabka elektaroonigga ah ee 3C ee ku saabsan soo iibsiga xilli-xilliyeedka, kororka sicirka ayaa yaraa.
18650 Nimh, 3.7 Batariga dib loo buuxin karo, Batariga Lithium Ion Polymer, 12v Lithium Ion Batariga dib loo soo celin karo, Li Battery, 12 Volt Xidhmada Laydhka Lithium Dib u Soo Celin Kara, Dhammaan Alaabooyinka